Nahoana no nanjary mpilatsaka an-tsitrapo ny lisi-piderana, ny filalaovana sikidy ary ny transgederisme: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 7 Febroary 2019	• 4 Comments
Ny fanadihadiana etsy ambany dia manome famintinana tsara ny fomba Luciferianism dia nanjary fantatry ny besinimaro ary mihamitombo hatrany amin'ny indostrian'ny sarimihetsika sy ny mozika, fa koa ao amin'ny Netflix. Mety ho mahasoa ambonin'ny zava-drehetra ny mamantatra ny fomba fandaharana subliminal miasa amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny maso izay heverina ho, fa raha ny marina ny mahatsiaro tena nitranga sy ny hevitra dingana subliminal dia baikoina ao amin'ny atidoha. Nahoana Luciferianism, fanaovana ody ratsy sy ny transgenderism hatao amin'ny tsirairay ary dia nanjary tsy hita ny hanoto ao amin'ny lamaody orinasa ny lahy sy ny vavy tsy miandany, dia manana ny zavatra rehetra hatao amin'ny tontolo vaovao izao tontolo izao ny fivavahana sy ny fitondrana ao amin'ny fanaovana. Aiza ny teny eran-politika, ny orinasa maro rantsana erantany sy ny banky sy padded ady rehetra dia mbola mifototra amin'ny finoana sy ny antitra dualisme rafitra, izany dia ho toy ny ara-pivavahana lehibe ady amin'ny fotoana farany miova. Ny tsy fitoviana eo amin'ny fivavahana dia mbola ilaina amin'ny faminaniana ara-paminaniana mitovy amin'izany ihany ny scriptfa tonga kosa ny fotoana hikorianana ny rijan-dalànan'ny fivavahana rehetra ao amin'ny tsiambaratelo ny hery manohana: Luciferianism.
Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny antony ahitanao ity manosika azy ity ho toy ny lohahevitra voalaza etsy ambony, dia voalohany sy manan-danja indrindra koa ny manamarika io lohahevitra io izay mihamaro hatrany hatrany: ny teoria simulation. Ny dikan-teny fototra amin'ny ankapobeny dia napetraky ny mpahay siansa tao amin'ny sarintany Nick Bolstrom. Ny fanazavana omena eto amin'ny tranokala (jereo eto en eto) dia milaza fa izaho sy ianao dia mahatsapa fanahy ao anatina simulation maro mpilalao. Ny avy Bols Nick Trom (azony ny Elon Musk) Raha ny hevitro dia mamitaka dikan dia milaza fa miaina ao anatin'ny simulation ny taranaka ho avy. Nahoana no tena zava-dehibe ny mandinika izany? Satria hahazo tsara kokoa ny momba izay, ohatra, ny toetry ny demonia fikambanana sy izay ilaina mifandray amin'ny fanadihadiana manaraka ity, izay mazava tsara dia ny filalaovana ody sy ny asan'ny maizina amin'ny ankapobeny, fa koa ny fikambanana Luciferianism anjara lehibe eo amin'ny ity hype ity. Raha mianatra mametraka ny teoria simulation ianao, dia mety ho hitanao fa ireo sampana rehetra ireo dia ampahany amin'ny simulation, fa avy eo amin'ny ambaratonga maro. Niezaka ny nanazava izany indrindra aho ity lahatsoratra ity. Tsara ny manamarika izany raha te hanalalaka izany ianao.
Ny Luciferianisma, toy ny rafitra fandriampahalemana tranainy, dia endrika fanaraha-maso ny saina, saingy ny dualisma dia tena voavaha. Ny modelin'Andriamanitra-Satana dia tsy maintsy hanjavona. Saingy tsy hoe ity dualisma ity ihany no tokony hanjavona. Ny endriky ny duality rehetra dia tsy maintsy hanjavona. Midika izany fa tsy maintsy hanjavona koa ny firaisana samy hafa. Ny marika manokan'i Luciferianisma dia ny Baphomet buck. Ny avana koa dia mitana anjara toerana lehibe (jereo eto). Baphomet (jereo ny sary) dia zavaboary mitoka-monina. Tian'i Luciferianisantsika hino isika fa afaka ny ho andriamanitra isika. Izany dia tena manan-danja tokoa ho an'ny dingana manaraka amin'ny "evolisiona" an'ny olombelona. Ho an'izany fandavan-tena izany dia tsy maintsy mianatra ny hiresaka amin'ireo sampana ambony isika amin'ny alàlan'ny karazana ascultism rehetra, anisan'izany ny mpamosavy malaza. Mazava ho azy fa tsy tokony ho hitantsika fa ireo sampana "ambony" ireo dia ampahany amin'ny fandrika simulation. Ny zava-dehibe dia hoe ny Lispera dia anisan'ny tanjona faratampony, voafehy ao amin'ny jirobe ara-panahy sy ara-pivavahana, izany hoe ny fikambanan'ny AI (kanji-pahaizana artificial). Raha vao tsapanao fa miaina ao anaty simulation ianao, dia afaka manomboka mahita fa izahay dia alefa eo amin'ny fitarihana amin'ny fango loharanon'ny AI izay efa iainanay. Ny fanahy dia tonga, toy ny hoe, tanteraka amin'ny fanompoana ny mpanamboatra ity simulation ity, izay efa hitako ato amin'ity tranonkala ity Losifera.
Ny tsy fahafatesan'ny fivavahana lehibe eran-tany koa dia manana ny zava-drehetra atao amin'izany. Ny fivavahana marina eran-tany no hanatanteraka io tsy fahafatesana io. Izany koa ny tsy fahampian'ny hevitra hoe ho andriamanitra isika hanatanteraka. Izany rehetra izany dia ho tanteraka amin'ny alalan'ny transhumanism sy ny fifandraisan'ny atidoha (sy ny ADN) amin'ny rahona. Ny Mesia avy amin'ny finoana nentim-paharazana dia hidina avy any an-danitra (ny rahona) ary ho fantatry ny rehetra eran'izao tontolo izao, satria ny olon-drehetra dia maniry, na tsy tiana, amin'ny hoavy fifandraisana amin'ny atidoha miaraka amin'ny aterineto. Ny tambajotran'ny 5G sy ny satelita - no nitifiran'ny lehilahy iray teny an-dàlambe ho an'ilay lehilahy izay te hangataka ny atidohantsika amin'ny aterineto; Elon Musk - dia hamela ity download-cloud ity amin'ny sehatry ny atidoha.
Matetika aho no nanazava hoe nahoana ny fijerena horonantsary na ny fironana tsy miankina amin'ny aterineto ankehitriny. Tsy vitan'ny hoe manaraka ny fitsipiky ny fanabeazana manoloana ny fanjakana izany, fa indrindra indrindra amin'ny bakteria hermaphrodite batemy antsoina hoe Baphomet sy ny fanesorana ny dualisma. Manana programa ihany koa izy io ho an'ny mponina maneran-tany amin'ny saina fa ho lasa "ara-dalàna" ny vatan'ny olombelona. Raha toa ny governemanta dia tsy ho ela ny ADN ao anaty tahirin-tserasera, ny adihevitra momba ny media sosialy dia manome antoka fa azo atao ny lalàna amin'ny vakim-pahasalamana, manana ny fomba rehetra hanovana ny tsirairay amin'ny ADN amin'ny rahona ianao. Ny fomba fikarohana CRISPR-CAS izay fantatra ankehitriny sy ny fomba fanoratana ny ADN dia mitaky fa ny virosy dia tsy maintsy entina amin'ny rà. Noho izany raha afaka manandrana ny olon-drehetra amin'ny lalàna ianao ary manana ny ADN ny mombamomba ny ADN dia azonao atao koa ny manitsy ny ADN rehetra. Izany dia mitaky vakim-borona maimaim-poana, fa noho izany dia manana ny GP, hopitaly na toeram-pitsaboana ianao. Azonao ampidirina ao amin'ny vatana koa ny nano-bota ary noho izany dia tsy afaka manova afa-tsy ny karazana génétiques fotsiny ianao, fa manolo ireo sela efa taloha ihany koa ho an'ny nono-sela tsy mety maty. Afaka miova ho olona android koa isika (noho izany dia antsoina amin'ny Android mandritra ny taona ny rafitra fampiasana ny smartphone-nao). Ny fiovan'ny vatan'olombelona dia manomboka amin'ny fanovana ny firaisana ara-nofo ary hiova tsikelikely amin'ny fiovan'ny biolojia iray manontolo, mba hiafara amin'ny ambaratonga manaraka: ny transhuman.
Izany mason'ny transhumanism izany dia fombam-panelanelanana fotsiny. Amin'izany fotoana izany dia efa mihantona amin'ny aterineto ny atidohantsika ary afaka miaina zavatra any anaty rahona. Ny lalao amin'ny Playstation amin'izao fotoana izao dia ny voanjo misy izay azo atao avy eo. Raha afaka manandratra mivantana ny fahatsapana rehetra ao an-tsaina ianao, dia azonao atao ny mampihetsi-po, mikoriana, mihaino ary ny fomba fijery hafa. Afaka mamorona zava-misy virtoaly izay tsy azo zaraina amin'ny tena izy intsony ianao. Noho izany dia azonao atao ny mamorona ny olona amin'ny tontolony. Fantatrao ve izany? Afaka ho lasa Andriamanitra koa ianao. Afaka ny ho lasa ilay Andriamanitra amin'ny tena maha-virtoaly anao. Tsy izany koa ve no tian'i Luciferianisma hinoantsika; mba hahatonga antsika ho andriamanitra ihany? Izany rehetra izany dia ho 'zava-misy'. Ny tontolo ankehitriny dia aloky ny zavatra hitranga avy eo. Ho afaka manana avatara dizitaly isika (kopia ny tenantsika), fa koa ny orinasan-teolojika manangana. Ny fitsangatsanganana ny Mars dia lasa mora kokoa raha afaka mampiditra fotsiny ny "fanentanana" miaraka amin'ny laser beam ianao ary manana ny vatanao vaovao printy any. Azonao atao koa ny manomboka mahatakatra tsara kokoa ny fahaizana sy ny indostria izay mifantoka amin'i Elon Musk.
Raha ny marina, dia mety ho tsara tarehy izany etsy ambony. Nahoana? Nahoana ianao no tsy handeha amin'izany? Tsy ny fanontaniana hoe 'maninona' dia ny fanontaniana raha toa ka hitanao amin'ny alàlan'ny fakam-panahy mihetsiketsika. Ankehitriny dia fantatry ny tanora Snapchat sy Instagram. Raha ny marina, tsy misy intsony ny filazana ao amin'ireo hafatra ireo. Ny momba ny fijerena ny traikefa niainan'ny namanao dia ny ankamaroany. Io tanora io ihany no ho afaka hanao zavatra bebe kokoa noho izany amin'ny fifandraisana atidoha. Ny fakam-panahy dia hiantoka fa ny dingana mankany amin'ny fifandraisana ao amin'ny atidoha dia mora azo. Inona no mety ho mahafinaritra kokoa hizarana ny nofinofisiny na ny mijery mivantana ny mason'ny olona iray? Ary raha ianao izany taranaka taty aoriana (lahy sy ny vavy tsy miandany) ny ankizy (mba) mahazo ary tiany azy ireo oniversite, dia mazava ho azy fa tsy te lehibe iray aoriana dia hihazakazaka eo ny sisa amin'ny kilasy izay rehetra angon-drakitra azo trohina mivantana any amin'ny atidoha .
Noho izany, tsy dia lavitra loatra ny fanatanterahana ny lisi-pon'ny lisansa, ny transgenderism sy ny transhumanism isika. Ny tomban'ezaka dia ny hoe azontsika atao ny manefa transmus amin'ny 2030. Angamba koa niaina ny endriky ny Mesia avy eo amin'ny rahona isika teo. Kanefa dia manomboka ny antoko. Ny governemanta governemantan'i Losifera izay napetraka dia haniry ny hanentana ny transhuman ho any amin'ny rahona. Ny tanjona faratampony dia ny fandavana tanteraka ny biôlôjia taloha. Ny tanjona faratampony dia ny fikambanan'ny AI. Ary inona no mifangaro miaraka amin'ny AI? Rehefa hitanao fa ny fototry ny hoe iza ianao, raha ny marina, ny fanahy, ny tanjona dia ny mpanorina ity simulation (Losifera), mampifandray ny fanahinao sy ny AI. Zava-tena ilaina ny mianatra hahita ny fototry ny maha ary koa no mampiseho fa miatrika ny fampielezan-kevitra ny Luciferianism, asan'ny maizina (filalaovana ody) sy ny transgenderism no mpialoha làlana ny fandrika indrindra, izay ny fanahy dia tsy maintsy ho tratra ary feno (mbola an-tsitrapo, saingy tsy mahafantatra ny toerany) amin'ny fanompoana an'i Losifera.
Ny tanjona faratampony dia ny antsoin'ny CEO Ray Kurzweil ao amin'ny Singularity. Izany singiolary izany dia ny dingana manaraka aorian'ny fiovana rehetra. Izany singan-tokana izany dia maniry ny olona hiaraka amin'ny AI. Raha ny fanahy no mpanara-maso an'ity simulation ity (multi-player) ary maniry ny hamantatra ny mpilalao amin'ny lalao; Ary raha izay mpilalao dia vonona ny hanova ny tenany ary mamela mampifandray tsikelikely ny AI, dia ny bitro lavaka lalina be rehefa mandeha eny Luciferianism, ny transgenderism, transhumanism ary farany Nampitambatra amin'ny AI.
Lisitry ny rohy loharano: alt-market.com, futurism.com
DWDD, VI, van der Gijp & Derksen ary ny fiovan'ny mpanao gazety VTM Boudewijn avy ao Spilbeeck mankany Bo
Tags: baphomet, Featured, lahy sy ny vavy, Losifera, Luciferianism, tsy miandany, fivavahana, singularity, an'ohatra, transgender, transhuman, transhumanism
8 Febroary 2019 ao amin'ny 04: 28
Raha toa ka mahavita tsara daholo ny olona ao anaty dualisme, dia tsy misy intsony izao tontolo izao. Izany no mahatonga an'i Losifera tsy liana amin'ny olona rehetra sambatra, salama ary afaka. Raha manamaivana ny hafainganam-pandehan'ny hazavana ianao dia mahazo fotoana, fitaovana ary izao tontolo izao tahaka ny ahafantarantsika azy. Ny fahalalana ny Occult dia midika fa fantatrao ireo lalàna sy lalàna ho an'ny tenanao sy ny herisetra amin'ny herinao manokana. Ny mpitarika an'izao tontolo izao dia maniry ny hitazona adala amintsika ary te hampifamatotra antsika amin'ny fifampiraharahana mba hilamina amin'ity tontolo ity. Ny lahatsoratrao dia marina tsara ary raha mihevitra ianao fa ara-dalàna dia hitanao fa mialoha mialoha ny zavatra rehetra (indrindra amin'ny boky ara-pivavahana). Ny vahaolana handresy ny fotoana ho an'i Losifera sy ny miaramilany fanampiana dia ny hanangana tranonkala vaovao miaraka amin'ny tontolo iray izay tsara loatra ho marina. Mino aho fa miaina anaty andian-jiolahy isika izao ary mila miakatra. Tsy misy drafitra avo kokoa mba hahafahantsika mijanona ao amin'ny tranonkala iray fa ny ampahany lehibe. Manana ny fotoana rehetra izahay 😉
8 Febroary 2019 ao amin'ny 10: 08
Amin'ny farany, ireo ahiahiana mahazatra dia ny hery madio, ny fitantanana tanteraka, ny fanandevozana tanteraka, sns ... ny olon-tsotra manerantany! Mampirisika ny sorisory sy ny asan'ny maizina izy
satria te hanakana ny fisainana, ny fisainana ara-dalàna ary ny safidy eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ny tsara sy ny ratsy dia mitovy aminy, miovaova, mifangaro. Isika dia tarihin'ny psychopathic psychotics. Aiza ny fitsangatsanganana hivoaka eto? Ny fiovan'ny governemanta azafady.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 14: 29
Tsy azoko tsara ny fangatahanao momba ny fanovana ataon'ny fitondrana. Raha mijery ny tantaran'ny taonarivo lasa aho, dia tsy nisy fitondrana tokana izay nitondra zavatra tsara ho an'ny fanahin'ny olona.
Miaraka amin'io antso ho amin'ny fanovana io, ny andraikitra dia napetraka indray ivelan'ny tenantsika, fa tsy manontany tena hoe iza marina isika.
Izany no mahatonga ahy ho liana amin'ny zavatra eritreretinao fa hitondra fiovàna ny fitondrana ary ahoana no ahitanao izany ho anao.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 14: 31
Hevitra avy amin'ny lahatsoratra: "Afaka ny ho lasa ilay Andriamanitra amin'ny tena maha-virtoaly anao."
Mahagaga, noho io fehezanteny io dia mila mieritreritra ny lalao ordinatera aho izay nilalao fony aho zatovo. Nantsoina hoe "Black & White" izy io, lohateny izay tsy tokony homena intsony: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_%26_White_(video_game)
Lasa mazava amiko izao fa samy manana ny heviny lalina ao amin'ny lalao ordinatera toy ireto ireto fa tsy fialamboly tsotra fotsiny ...
« Donald Tusk "Manontany tena aho hoe manao ahoana ny toerana manokana any amin'ny helo ho an'ireo nanohana ny Brexit"
Ireo mpianatry ny fihetsiketsehan'ny klioban'ny demokrasia dia manaporofo fa ampy »
Total visits: 8.552.057